Semalt बाट सुझावहरू: कसरी एक स्काम ईमेल सही ढंगमा हाल्ने?
जालसाजीहरूले अनपेक्षित पीडितहरूबाट चोरी गर्नका लागि बढि घोटाला ईमेलहरू प्रयोग गर्दैछन्। यद्यपि उनीहरूको अधिक धेरै चालहरू निरन्तर खुलासा भइरहेको छ, जालसाजीहरू जहिले पनि एक कदम अगाडि देखिन्छन्, र तिनीहरूले मानिसहरूलाई उनीहरूको घोटालामा आकर्षण गर्न केहि पनि गर्नेछन्। नतिजाको रूपमा, कहिलेकाँही वास्तविकबाट फिशिंग ईमेल भिन्न गर्न गाह्रो हुन्छ। तर त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जसमा स्क्याम ईमेलहरू साझा छन्।
माइकल ब्राउन, Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक, तपाईंलाई एक फिसि email ईमेलको निम्न आधारभूत संकेतहरू जाँच गर्न प्रस्ताव गर्दछ:
तपाईंले कार्य सुरू गर्नु भएन
जब तपाइँले एक इमेल प्राप्त गर्नुभयो जुन तपाइँले चिठ्ठा जित्नुभयो वा भर्ती एजेन्सीले तपाइँको पुनःसुरु समीक्षा गरेको छ र तपाइँलाई एउटा काम दियो भनेर दर्साउँदछ, एक समस्या छ। तपाईंले कहिले लटरी टिकट किन्नु भएन वा कामको लागी आवेदन गर्नु भएन। तपाई पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि ईमेल सन्देश एक स्क्याम हो।
ईमेलले तपाइँको व्यक्तिगत जानकारीको लागि सोध्छ
यो व्यक्तिबाट जानकारी चोर्न प्रयोग गर्ने साधारण विधि भ्रामकहरू हुन्। एक घोटाला ईमेल अक्सर जानकारी को लागी सोध्छ जुन यो पठाइएको उद्देश्यको लागि प्रासंगिक छैन। उदाहरण को लागी, एक रोजगार प्रस्ताव को साथ एक घोटाला ईमेल को लागी तपाइँको जन्म मिति र तपाइँको बैंक विवरण सोध्न सक्छ। यो तपाइँको पहिचान को एक प्रमाण माग्न को लागी अगाडि जान सक्छ, र यसको मतलब आईडी वा राहदानी को एक प्रतिलिपि पठाउने। यस्तो अवस्थामा, तपाइँ रोकिनु पर्छ र आफैलाई सोध्नु पर्छ: कुन कम्पनीलाई यी सबै विवरणहरू आवश्यक पर्दछ तपाईंले रोजगार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अघि?
URL मा एक असामान्य डोमेन नाम छ
Scammers सधैं पीडितमा निर्भर गर्दछ असामान्यता को बारे मा जानकारी छैन। यस केसमा, ती व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्छन् जुन वेबसाइट डोमेन नामहरू कसरी नामकरण हुँदैन भनेर जान्दैनन्। DNS नामकरण संरचना अनुसार, कुनै पनि डोमेन को अन्तिम भाग सबैभन्दा जानकारी छ। एक डोमेन नाम help.paydayloans.com paydayloans.com को एक बच्चा डोमेन हुन सक्छ। यो मुख्य डोमेन नाम बाल डोमेन नामको अन्तमा देखा पर्दछ। Scammers जसले वास्तविक कम्पनीहरूको नक्कल गर्दछ paydayloans.com.scamdomain.com जस्तै एक डोमेन नाम बनाउनेछ। यस्तो डोमेन नाम paydayloans.com बाट उत्पन्न भएको हुँदैन किनकि paydayloans.com बनेको डोमेन नामको बाँया पट्टि छ।
खराब व्याकरण र ठूला अक्षर र विराम चिह्नहरूको अनुपयुक्त प्रयोग
प्रायः स्क्याम ईमेलहरू नराम्रो रूपमा लेखिएका हुन्छन्, आधारभूत र अव्यावसायिक भाषा प्रयोग गर्नुहोस्, हिज्जे गल्तीहरू छन् र प्रायः ठूला अक्षरहरू र उद्बोधन चिन्हहरू अनुपयुक्त रूपमा प्रयोग गर्दछन्। एक नौकरी खोजीकर्तालाई पठाइएको स्क्याम ईमेलले कामको विवरणको नजिकै शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्दछ, तर यसले स्पष्ट अर्थ राख्दैन। सन्देश या त पूर्ण ध्वनि बनाइएको ठूलो स्वरुप बेमानी हुनेछ। घोटाला काम को पेशकश को लागी तपाइँको कौशल को ख्याल छैन। उनीहरूले भूमिकाको बारेमा धेरै विवरणहरू दिन सक्दछन् तर कामको लागि आवश्यक सटीक कौशल सेटको बारेमा धेरै थोरै जानकारी।
ईमेलले तपाईंलाई पैसा पठाउन सोध्दछ
यो पैसा कुनै पनि खर्च (कर, शुल्क, आदि) कभर गर्न को लागी फरक पर्दैन। कुनै पनि ईमेल जुन पैसा माग्छ लगभग निश्चित रूपमा एक स्क्याम हो। र याद गर्नुहोस् तपाइँ पहिलो ईमेल प्रयोग गरेर हिट नहुन सक्नुहुन्छ। स्मार्ट स्क्यामरहरू तपाईंलाई पैसा माग्नु अघि उनीहरूमा विश्वास विकास गर्न प्रयास गर्नेछ। चालको लागि झर्नु हुँदैन। चाहे उनीहरूले तपाईंलाई पहिलो वा दशौं ईमेलमा पैसा पठाउन आग्रह गरे, यो अझै पनि एक घोटाला हो।
जब ईमेलको बारेमा केहि सही महसुस गर्दैन, त्यहाँ उच्च संभावना छ कि यो वास्तविक छैन। यदि तपाइँले प्राप्त गर्नुभएको इ-मेल सन्देश एक प्रकारले संदिग्ध देखिन्छ भने, मेल द्वारा निर्देशित कुनै पनि कार्यवाही गर्नबाट जोगिनु र चाँडै यसको प्रामाणिकता जाँच्नु उत्तम हुनेछ।